MAREYKANKA OO LIISKA ARGAGIXISADA KU DARAY LABO RUUX OO SUUDAAN UDHASHAY - iftineducation.com
MAREYKANKA OO LIISKA ARGAGIXISADA KU DARAY LABO RUUX OO SUUDAAN UDHASHAY
aadan21 / January 9, 2013
iftineducation.com – Dowlada Mareykanka ayaa waxa loogu yeero Liiska Argagixisada waxa ay ku dartay labo ruux oo u dhashay dalka Suudaan,kadib markii ay ku eedeysay inay geysteen weeraro argagixiso.
Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad iyo Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed ayaa dowlada Mareykanka waxa ay ku sheegtay in weeraro hubeysan ay ka geysteen caasimada Suudaan ee Khartuum bishii Janaayo 1, 2008-dii.
Warbixin ka soo baxday Waaxda Mareykanka u qaabilsan argagixisada ayaa waxay ku sheegeen labadan suudaaneeska ah ee lagu kala magacaabo Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad iyo Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed in iminka wax ka danbeeyay ay qeyb ka yihiin dadka ku jira Black Listiga waxuu Mareykanka ugu yeero ee Mareykanka uu doon doonayo.
Shaqsiyaadkaan ayaa Mareykanka ku eedeeyay inay ka danbeeyeen weerar lagu qaaday safaaradii Mareykanka uu Khartuum ku lahaa,islamarkaana halkaasi lagu dilay John Michael Granville oo ahaa diplomacy Mareynkanka oo ka shaqeynayay Hay’ad Mareynkan oo caalami ah kana shaqeyneysay barnaamijyada hormarinta iyo shaqaalo ka shaqeeyanayay hay’adaasi oo suudaan u dhashay.
Abdelbasit iyo Makawi ayaa sanadkii 2009-kii waxaa gacanta ku dhigay xukuumada Suudaan iyaga iyo labo kale oo ku eedeysnaa in ay gacan siinayeen shaqsiyaadka la doon doonayay,waxaana Maxkamada Suudaan ay ku xukuntay xukun dil ah.
Dabadeed sanadkii 2012-kii ayay shaqsiyaadkaan iminka Mareynkanka liiska ku daray xabsigii ka baxsadeen,iyagoo markaasi dil u geystay sarkaal ka tirsanaa Poliiska kuwo kalena dhaawacay.
Abdelbasit iyo Makawi ayaa haatan Mareynkanka waxa uu sheegay in ay ku sugan yihiin Soomaaliya.
Fiska Oo Banaanka Soo Dhigtay Sawiro Iyada Ninkeda Cusub , Iyo Hanuniye Oo Fariin Lo Diray -Daawo
Augustine Mahiga Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya oo codsi xasaasi ah u jeediyey Madaxweyne Xasan iyo Hay,ado caalami ah.